के म देशभक्त हूँ ? मैले मलाई नै सोधेँ । हूँ, म साँच्चै देशभक्त हूँ ! छुच्चो दिमाख पड्किहाल्छ । मन–मस्तिष्कले परामर्शको खोजी गरिरहेको हुन्छ । कारूणिक द्विविधा हट्न नपाउँदै एकोहोरो टोलाइरहेका आँखाका नानी झिसमिस बनिदिन्छ ।
‘पक्का पनि म आत्मीय देशभक्त होइन’ तर बाहिरी जीवनमा म आफूलाई देशभक्तिमा ढाल्ने पूर्ण पर्यत्न गरिरहेकै हुनेछु । सोच्छु, यदि म देशभक्त हुन्थेँ भने, मैले सामान्य जीवनमा कहिल्यै कसैलाई झुक्याउने, ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, आफू अगाडि बढ्ने बहानामा अरुलाई होच्याउनेदेखि लिएर राष्ट्रको सम्पत्तिमा चासो नदिने, भ्रष्टाचार गर्ने आदि–इत्यादि गर्ने थिइनँ होला !
यत्ति सोच्न नपाउँदै मेरो माथिल्लो कन्सिरीको रौँ तातेर आयो र बर्बराउन थालेँ– अरु त ठीकै हो चाहेर वा नचाहेरै, जान वा अञ्जानमा गरेँ होला, तर के म सरकारी कर्मचारी वा नेता हूँ र भ्रष्टाचार गर्नलाई ? अहँ, म मान्दिन मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर ।
निकै गहिरो सोचमा परेँ म, आफैँले आफैँलाई भ्रष्टाचारी भनेकोमा । तव सुरू भो भ्रष्टाचारको विष्लेषण । आखिर के रहेछ भ्रष्टाचार भनेको ? कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार ? के सरकारी कर्मचारी र पदमा पुगेका नेतालै मात्रै गर्छन् त भ्रष्टाचार ? म खुल्दुलीले छटपटाउन थालेँ ।
म सन्दर्भग्रन्थ लिई आफ्नो निष्कर्ष निकाल्छु– भ्रष्टाचार एउटा वीष हो जसले देश, सम्प्रदाय अथवा समाजका मानिसको दिमागमा नराम्रो दुर्गन्ध फैलाएको हुन्छ । यसले केवल थोरै इच्छा अथवा अनुचित लाभको लागि सामान्य मानिसलाई बर्वादीतर्फ धकेलिरहेको हुन्छ ।
यसको सम्बन्ध अरु कोहीद्वारा आफ्नो शक्ति अथवा पदको गैरजिम्मेवारी तरिकाले दुरुपयोग गर्नु हो, चाहे सरकारी होस् या गैरसरकारी संस्था किन नहोस् यसको प्रभाव व्यक्तिको विकासका साथै राष्ट्रमा पनि परिरहेको हुन्छ । यही समाज तथा समुदायबीच असमानताका ठूलो कारण हो । साथै यसले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा राष्ट्रको प्रगति र विकासमा बाधा पु¥याउँछ ।
वास्तवमा मैले विगतमा गरेको अवैधानिक, अमानवीय, अनुचित कार्य कोट्याउँदै जान थालेँ । सानोमा आमाले ‘कलम किन्’ भनेर दिनुभएको ५ रुपैयाँमा १ रुपैयाँको सुइरो किनेर ४ रुपैयाँको गुच्चा किनेर पल्लोघरे साईंलादाइको छोरासँग जंगलतिर गई खेलेको कुरो टुप्लुक्क दिमागमा उपस्थित हुन्छ । यसलाई के भन्ने भनेर टुङ्गो लगाउन नपाउँदै, ‘भ्रष्टाचार’ बाहिर कानमै गुञ्जिने गरी जिब्रो पड्कियो ।
मैले सुरूवात गरेको भ्रष्टाचारको स्वरुप ‘गर्दा र गरेको सुन्दा’ सामान्य लाग्छ तर वास्तवमै बुझ्दा गम्भीर हुन आउँछ । यसै प्रसङ्गलाई रिउखोलाको पुलसँग जोड्न थालेँ । त्यहाँ पनि सरकारले छुट्याएको ५ रुपैयाँमा मैले जसरी नै १ रुपैयाँको पुल बनाएर ४ रुपैयाँको गुच्चा किनेर खेल्न त गएको होला नि !
त्यसैले त मेरो खोलबिनाको सुइरो भोलिपल्ट भाँच्चिए जसरी मजबुत जगबिनाको पुल बाढीले बगाएर लगेको थियो । उफ ! बच्चाको कुरा के गर्ने, अहिल्यै के–के गर्छु सम्झन मनलाई ताजगी बनाउन लागेँ ।
विवाह दर्ता बनाउन जाँदा ३५ दिन कटिसकेकोले जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमलाई मध्येनजर गर्दै विवाहको मिति नै परिवर्तन गरेर आफूलाई महान् सम्झेको घटनाले पनि आफ्नो स्थान लिई छाड्यो र यस घटनालाई पनि भ्रष्टाचारकै स्वरुप नदिइरहन सकिनँ ।
१५–२० हजार मासिक कमाइरहेकै भए पनि, क्याम्पसमा गरिब हुँ भनेर छात्रवृत्ति लिन नचुकेको वास्तविकता पनि बर्रर असिना परे झैँ पर्न लाग्यो । अझ पुरानै विद्यार्थी परिचय–पत्रमा नयाँ मिति राखेर बसभाडामा छुट लिएको आधिकारिक भ्रष्टाचार त ह्वात्तै मैँमाथि हामफालेजस्तो लाग्यो ।
फारम भर्ने लाइनमा बस्नुपर्ने झण्झटले एकजना अगाडि बसेको व्यक्तिलाई २०० रुपैयाँ दिएर ३ घण्टाअघि फारम भरेर फर्केको नेपालमा चल्ने खालको व्यवहारसँगै भनाइहरु पनि गुञ्जिन लाग्यो ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै अपराधी हुन् ।’ अँ त है साँच्चै मन लर्वराउन थाले, आजसम्म मैले कति सामान किनेँ ।
जस्तैः किरानाको खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल स्टेशनरी सामान, ग्यास, चुलो, दराज, पलङआदि । तर कहिल्यै पनि बिल मागिनँ । बिल दिए पनि समान्य कागजको खोस्टामा लेखेर दिन्छन्, त्यही गोजीमा हाल्यो हिँड्यो । के यो भ्रष्टाचारलाई गरेको प्रोत्साहन होइन र ? आँखा रसाउन थाल्छ । ह्या..! सामान्य जीवनमा आउने पराकम्पनको बारेमा सोचेर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र ? अहँ, हुँदै हुन्न ।
ठूलै कुरा सोच्नु प¥यो भनेर दायाँ–बायाँ फर्किन्छु केही देख्दिन । देख्छु त केवल खोक्रो देशभक्ति । समाचारमा आउनकै निम्ति गरेको सहयोगले अरुलाई त झुक्याउला, आफैँलाई त पिरोलिरहन्छ नि । अस्ति भूकम्प जाँदा एकजनाले मामाघरको भत्केको फोटो प्रिन्ट गरेर क्याम्पसमा छात्रवृत्ति पाउँ भनी दिएको निवेदन, झुटो हो भनी क्याम्पसमा उजुरी गर्न गइनँ किनकि मलाई के मतलब !
पल्लो भित्ताबाट खसेको आवाजसँगै जीउ सिरिङ्ग भयो र ठूलै स्वरको ठेस लाग्यो । उसो भए केको देशभक्ति त ? जब म काम गरिरहेको हुन्छु । पछाडिबाट आवाज आउँछ ‘दाइ कालिका एफएम कता पर्छ ?’ म जुरुक्क उठ्दै हातको इसाराले देखाउँछु । धन्यवाद दाइ भन्दै बाटो लाग्छ । पुनः ‘दाइ कालिका एफएम कता पर्छ ? हेर्छु, अर्कै रहेछ । के कार्यक्रम रहेछ एफएममा उठेरै उसको गन्तव्यतर्फ सोझिएँ ।
सर सप्तगण्डकी क्याम्पस कता पर्छ ? उठ्नै अल्छी लागेर सीधा जानुस् अनि दायाँ मोडेर ५ मिनेट हिँड्नुस् । हे हजुर ! सेक्युरिटीको अफिस कता होला ? त्यही पल्लोघरको माथि हेर्नुस् त । गएर हेर्दै फर्किआएछ लौ न मैले त फेला पार्न सकिनँ । हेर्दा त पढेलेखेकै जस्तो हुनुहुन्छ, बोर्डमा पढ्नुस् न नाम ।
ममा मानवीय उग्र स्वरुप देखापर्छ, काम गर्नै नदिने भए । देशभक्त हूँ भनेर फूर्ति लगाउने मनुष्य त ठाउँमा आइहालेछ नि ! अगाडि कम्प्युटरमा ठूलो अक्षरमा देखापर्छ । जाबो ४ जनाले सोध्दा त हल्लिने मानिसको चरित्र त्यतिका जनताले नहल्लाउन पनि कसरी ?
नेताप्रति आभार प्रकट गर्न खोज्छु तर फेरि एकाएक सिंगौरी खेल्छु म रिसेप्सनमा बसेको रिसेप्सनिष्ट हूँ र तिनीहरुलाई बताइरहनलाई, मेरो आफ्नो काम गर्नुपर्दैन ? देशभक्त बन्ने सपना टाढिँदै गएको अनुमान पनि नलगाइरहन सक्दिनँ ।
बाइकमा पेट्रोल हालिदिने आश्वासनमा परी बाइक ¥यालीमा जानुलाई देशभक्ति भनिन्छ भने ०४६ सालको जनआन्दोलनमा आमाको पछि–पछि खालीखुट्टा कुदेको हुँ म ! अनि भइनँ त म देशभक्त ? अँ साँच्चै, रक्तिम परिवारको गीत कम मनपर्छ मलाई, लोकदोहोरीमा त झन् ढल्की–ढल्की नाच्छु । अरुलाई सुमधुर दिने स्वर नभए पनि आफ्नो निम्ति त कुनै राष्ट्रिय कलाकारभन्दा कम छैनजस्तो लाग्छ ।
तर, गीत रेकर्ड गर्छु आफैँलाई के नमिले–के नमिलेकोजस्तो लाग्छ सम्झन्छु– आज मलाई रुघा लागेकोले होला यस्तो स्वर आएको । नाचेको त अरुले पनि राम्रै प्रतिक्रिया दिएको मान्छु, त्यसपछि देशभक्तिको आभाष हुन्छ । बुद्धि भ्रष्ट भएकै हो त ? प्रश्नका लाम लाग्न थाल्छन् । नेपाली गीतमा नाच्दैमा देशभक्ति भइन्छ त ? खै के, खै के ! अचानक निधारमा हात बजारिएछ ।
देशमै बसेर आफ्नै सीप, पौरख बेचेर, राष्ट्रको हितको निमित्त राजस्व तिरी व्यवसाय चलाएको छु । कुनै नेताको चाकडी गरेको छैन । आफ्नो आस्था र विश्वास जसले राम्रो गर्छ उसैलाई दिनेछु । राष्ट्रप्रेमको स्टाटस बेला–बेलामा फेसबुकमा हालेकै छु । तर यसो भनिरहँदा विदेशमा रहनेहरुलाई के देशको माया छैन होला ? के उनीहरुमा देशभक्तिको भावना छैन होला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइरहनु नपर्ला ।
वास्तवमा विदेशमा रहँदा देशको माया जति लाग्छ त्योभन्दा स्वदेशमा रहँदा निकै कम लाग्छ । यो कुरा मैले केही समय भारतमा रहँदा अनुभूति गरेकै हूँ । देशमा बसी अरुले विदेशबाट कमाएर, बा आइएमईमा हालिदिएको छु है अनि कान्छाभाइलाई आइफोन पाइस् भन्ने शब्द सुन्दा खुट्टा तीनफिट उठाएर पासपोर्ट नबनाएको पनि होइन ।
स्वदेशको मायामा परेर देशभक्त बनेर हो या सुहाउँदो तलब सुविधा नपाएर कुन्नि आफ्नो कौतुहलता आफैँ मेटाउन नसकेर छटपटीमा पर्दै गर्दा खाना पाकिसकेको आवाजभित्रबाट गुञ्जियो ।
हजुर ! म तब–तबसम्म खाना खान्न, जबसम्म म देशभक्त हूँ कि स्वभक्त हूँ निष्कर्ष निस्कन्नँ । अन्ततः यी मेरा छुद्र व्यवहारले खोक्रो भए पनि देशभक्त बनेकै हूँ न कि पैसा लिएरै समाजसेवा ।
dilkajipaudel@gmail.com / न्यूज अभियानका लागि चितवन पोष्टबाट ।
अतिवादी सोचलाई परास्त गर्नुपर्छ
प्रचण्ड -बाबुरामको जनताले कठालो समाउने समय आयो !
देउवाले लिनुपर्ने सन्देश
जीवन के हो ? बरदान की अभिसाप
विश्वकप २०१८: ब्राजिललाई माथि उठाउने प्रशिक्षक
नाकाबन्दी भएको कतारमा अर्को विश्वकप होला कि नहोला ?
फोरमको सत्तारोहण र राजपाको जिम्मेवारी
सरकार संघीयताको पक्षमा कि विपक्षमा ?
जनता मुल्यबृद्धिको मारमा, जनप्रतिनिधि सुविधा बढाउदै
संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन
नेकपाको तल्ला कमिटी एकताले गति लिएन, कार्यदलको बैठकसमेत बसेन
मर्चवारमा योग तथा स्वस्थ जीवन कार्यक्रम
दुई बीचको रिलेशनशिप बारे के भन्छन मनिष सुन्दर श्रेष्ठ र मलिना जोशी ? हेर्नुस् रमाईलो भिडियो कुराकानी
सनातन धर्मको रक्षा अहिलेको आवश्यकता : साँसद रिता माझी